ch 3 uphawu – 2fish
ekhaya / Bible / YeVangeli kaMarko / ch 3 uphawu
3:1 kwaye kwakhona, wangena kwindlu yesikhungu. Kwaye kukho apho umntu owome isandla esomileyo.
3:2 Basenza ke, ukuze abone ukuba siyakulungisa * ngeMihla yokuPhumla, ukuze bammangalele.
3:3 Wathi ke kuloo mntu unesandla esomileyo, "Yima ezinzulwini."
3:4 Wathi ke yena kubo: "Kusemthethweni na ukwenza okulungileyo * ngeMihla yokuPhumla, okanye ukwenza okubi, ukunika impilo kubomi, okanye ukutshabalalisa?"Kodwa bathula.
3:5 Kwaye kokubasingasinga ngengqumbo, ukuba buhlungu kakhulu ngenxa yokuqaqadeka kweentliziyo zabo, Wathi omnye kwindoda leyo, "Yandisa isandla sakho." Yaye ke wazixolela, isandla sakhe saphiliswa kuye.
3:6 Ke abaFarisi, phuma, kwaoko ibhunga namaHerode ngaye, ukuba bangathini na ukumtshabalalisa.
3:7 Kodwa Wemka uYesu nabafundi bakhe, waya elwandle. Kwaye walandelwa sisihlwele exikhulu naye, bevela kwelaseGalili, nakwelakwaYuda,
3:8 naseYerusalem, nakwelakwaIdume, naphesheya kweYordan. Nabo yeTire neSidon, akuva oko wenza, beza kuye isihlwele esikhulu.
3:9 Yaye wathi kubafundi bakhe, ukuba isikhephe elincinane kuya kuba luncedo kuye, ngenxa yesihlwele, hleze cinezela phezu kwakhe.
3:10 Kuba waphilisa abaninzi kangaka, ukuba abaninzi kubo njengoko amanxeba kwafuneka ukuba ufika kuye ukuze bamchukumise.
3:11 Baphuma ke oomoya abangcolileyo, xa sukuba bembona, bawa ngobuso phambi kwakhe. Batsho bakhala, bathi,
3:12 "Wena unguye uNyana kaThixo." Kwaye wayala ngamandla kuzo, hleze bakwenze aziwe.
3:13 Kwaye kunyuka uye entabeni, wababizela kuye abo abakuthandayo, yaye beza kuye.
3:14 Waza wenza ukuze ezilishumi elinesibini wawuza kuba naye, ukuze nokuze abathume baye kuvakalisa ubukumkani bukaThixo.
3:15 Waza wabanika igunya lokuba ukunyanga izifo, , nelokuzikhupha iidemon:
3:16 waza wabeka phezu uSimon igama Petros;
3:17 kwaye kananjalo wathi ebekelwa uYakobi kaZebhedi, noYohane umntakwabo Yakobi, igama 'ngooBhowanerges,' yiyo i, 'OoNyana beNdudumo;'
3:18 kanye noAndreya, noFiliphu, noBhartolomeyu, noMateyu, Thomas, noYakobi ka-Alifeyu, no Thaddeus, kwaye uSimon umKanan,
3:19 noYuda Sikariyoti, lowo wamngcatshayo.
3:20 Kwaye baya indlu, kwaye isihlwele bahlanganisana ndawonye kwakhona, kangangokuba kakhulu ukuba baze bakwazi ukuba badle isonka.
3:21 Ke kaloku wakhe akuva oko, zaphuma zisiya kumbamba. Ngokuba bathi: "Ngenxa yokuba uye ziingqondo."
3:22 Kwaye wakubabhali wayesihla evela eYerusalem, wathi, "Ngenxa yokuba ebonise nguBhelezabhule, nangenxa yi isikhulu beedemon wenza ukuba ndizikhupha iidemon. "
3:23 Ke kaloku, ebabizele ndawonye, wathetha kubo ngemizekeliso: "USathana ukukhupha uSathana?
3:24 Kuba, ukuba buthe bahlulelana bodwa, obo bukumkani akanako ukuma.
3:25 Ke ukuba ithe yahlulelana yodwa, loo ndlu ayinako ukuma.
3:26 NoSathana, ukuba uthe wazichasa ngokwakhe, ukuba ahlukane, kwaye akayi kuba nako ukuma; endaweni sifika ekupheleni.
3:27 Akukho namnye unako kuphanga impahla yegorha, akuba engene endlwini, ukuba akathanga tanci alibophe igorha, andule ukuyiphanga indlu yalo?.
3:28 Inene, ndithi kuni, ukuba zonke izono baya kuzixolelwa oonyana babantu, kwaye kwanezinyeliso ngawo ziya babuye bandinyelisa.
3:29 Ke yena uya babuye bandinyelisa elichasene noMoya oyiNgcwele akayi ukuxolelwa naphakade; kunokuba yena uya kuba netyala lokwaphula umthetho obungunaphakade. "
3:30 Ngokuba bathi: "Unomoya ongcolileyo."
3:31 Unina wakhe nabantakwabo bafika. Bema ngaphandle, bathumela kuye, embiza.
3:32 Kwaye isihlwele sasihleli simjikelezile. Bathi ke bona kuye, "Khangela, unyoko nabazalwana bakho ngaphandle, abakufunayo. "
3:33 Kwaye benze, uthe, "Ngubani na uma nabantakwethu bam?"
3:34 Kwaye kokubasingasinga abo babehleli zonke kuye, uthe: "Khangela, umama kunye nabazalwana bam.
3:35 Kuba osukuba enako nikwenzile ukuthanda kukaThixo, nguye umzalwana wam, yaye udadewethu nomama. "